Almhütte Vesely Svist Lachtal
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMichal
IChalet entsha etofotofo eyenziwe ngomthi iVeselý Svišť (iMarmot eyonwabileyo) imi kumbindi weLachtal ski resort eStyria ngokuthe ngqo kwi-1a ski slope. I-chalet inokubonelela ngendawo yokuhlala kwiintsapho ezi-2 okanye iqela labahlobo abayi-8. Kumgangatho ophantsi kukho ikhitshi langoku elinendawo yokutyela kunye ne-barbecue, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala elinesitovu samaplanga. Phezulu kukho amagumbi amabini aneebhedi ezi-4, ibalcony kunye nelinye igumbi lokuhlambela.
I-Chalet entsha yokhuni i-Veselý Svišť e-Lachtal inokubonelela ngendawo yokuhlala kwiintsapho ezi-2 okanye iqela labahlobo abayi-8. Kumgangatho ophantsi we-chalet kukho ikhitshi evulekileyo yanamhlanje kunye netafile enkulu yokutya, indawo yokuhlala enesofa kunye ne-TV ene-DVD player, i-WIFI yamahhala. Umoya omnandi uphuculwa sisitovu sokhuni esiphakathi kwegumbi, ukuze ube nesidlo sakusasa okanye utye ngokushisa okukhazimulayo emva komqolo wakho. Kukho ukufikelela kwi-terrace esuka ekhitshini enemibono emihle yeentaba. Kwi-terrace kukho itafile eneebhentshi kwaye silungiselela i-grill ngokutya okumnandi kwangaphandle ehlobo. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese, iholo elinendawo yokomisa i-boot kunye negumbi lokugcina le-ski elinomnyango owahlukileyo ongaphandle. Phezulu kukho amagumbi amabini aneebhedi ezi-4 zokulala kunye negumbi lokuhlambela lesibini elinebhafu kunye nendlu yangasese. Ukongeza kwisitofu sokutshisa iinkuni, kukho ukufudumeza kwe-infrared yombane yanamhlanje kwi-cottage kunye nokukwazi ukulawula ipaneli nganye yokufudumala ngokwahlukileyo. Amanzi ashushu afudunyezwa ngebhoyila yombane.
• Igumbi elineebhedi ezi-4 ezinebhedi enkulu “emithathu” (oomatrasi aba-4, ububanzi bubonke yi-360 cm)
• Igumbi elineebhedi ezi-4 elinebhedi ephindwe kabini, iibhedi ezi-2 zabantu abangabodwa kunye nebalcony
Intsapho enamalungu ama-5 kunye nabantwana abancinci banokungena kwigumbi elinebhedi enkulu "emibini". Ukuba uzisa ibhedi yokuhamba yosana, ungayibeka nakweliphi na igumbi.
IZibonelelo zaseKhitshini: Ikhitshi lixhotyiswe ngezixhobo zale mihla zeAEG kunye neBosch. Ungasebenzisa i-4-hot plate induction cook top, i-oven yombane, i-microwave, iketile, umatshini wekofu we-Tchibo capsule, ifriji enefriji kunye ne-dishwasher.
Ivenkile yegrosari ekufutshane enegrosari esisiseko iphantsi kwisikhululo esikhulu se-chairlift eLachtal. Uya kufumana iivenkile ezinkulu e-Oberzeiring, Möderbrugg kunye ne-Oberwölz. Unokuphinda u-odole isonka sakusasa kwi-bakery yendawo, ehambisa kwi-chalet.
I-Lachtal yindawo ephakathi ye-ski resort e-Styria ene-35 km ye-slopes, i-10 km yeendlela zokutyibilika kwindawo evulekileyo, iilifti ezi-2 zezitulo ezi-6 kunye ne-8 tows ski. Isikhululo esisezantsi semoto yentambo enkulu sibekwe phezulu kakhulu (i-1,600 m) kwaye ininzi yemithambeka ixhotyiswe ngemipu yekhephu, ukuze ukwazi ukutyibilika ngokulula ebusika ngekhephu elincinci okanye ekuqaleni nasekupheleni kwexesha lonyaka. I-Chalet yethu yeVeselý Svišť ibekwe kumthambeka oluhlaza okwesibhakabhaka i-1a kwaye isitulo esikufuphi sikufutshane nje kumakhulu ambalwa eemitha ukusuka kwiskis. I-chalet iphakathi kwendawo ekuchithelwa kuyo iiholide, ngoko ke akukho ngxaki ukumisa emini ngesidlo sasemini okanye umise nabantwana nangaliphi na ixesha emini kwi-chalet.
ILachtal ikwabonelela ngendawo entle yokutyibiliza yabantwana yabantwana abatyibilizi abancinci abaxhotyiswe ngekhaphethi yabantwana abahambahambayo. Ekufikeni kwi-chairlift ephambili uya kufumana ukurenta izixhobo zokutyibiliza. Ukuba ufuna ukuya kwisidlo sasemini okanye ikofu, kukho iindlwana ezininzi ezimnandi ezineendawo zokutyela ngqo kumathambeka eLachtal. I-Grossa Almstadl ikufuphi, ene-terrace enkulu kwaye imalunga neemitha ezili-150 ukusuka kwi-chalet yethu, ngoko ungayindwendwela ibhiya emva kokushushuluza.
Kungenjalo, unokuya kwi-skiing ukuya kwi-ski resort ekufutshane eKreischberg okanye kwezinye iindawo zokuchithela iiholide ezikufutshane. Ukuhlala ngeveki, ukhetho olunomdla kukutyibilika kanye kwi-Ski Amadé enkulu eSchladming. Kungaphezulu nje kweyure ngemoto ukuya kwindawo yokupaka iimoto enkulu kwiHauser Kaibling cable car.
Ukongeza kwi-skiing ezantsi, i-Lachtal ikwabonelela ngesiphaluka esifutshane, esilungisiweyo se-skiing, i-ice rink encinci kunye ne-1.5 km ubude obukhanyisiweyo be-toboggan ukusuka e-Hirzmann Alm ukuya eLachtal. Ii-Sledges zinokuqeshwa kwiCafé Hannes kwaye kukho enye ekhoyo kwi-chalet. I-Skialpinists inokuthatha ithuba lendawo ephezulu ye-chalet yokufikelela lula kwi-ridge kunye neendawo ezininzi ezikhululekile eziphuma kwiithambeka ezingaphezulu komda wehlathi ukuze ziqhube ukuhla okanye zifumane ukufikelela okunemiqathango kwimithambeka ngokuhlwa emva kokushushuluza kunye nabantwana. I-Lachtal ski resort ikwabonelela ngokuzonwabisa kwaye iququzelele ukubaleka okufihliweyo okuhlukeneyo, iinkqubo zabantwana, kunye nezixhobo zomlilo ezimangalisayo ngo-Eva woNyaka oMtsha kunye nokubandakanyeka kweekati zekhephu. Kwimozulu embi, ukutyelela amachibi ashushu e-Aqua Therme Fohnsdorf yintlupheko emnandi.
ENTSHASAKO, HLOBO, NGEZENZAKALISELO:
I-Veselý Svišť I-Chalet yindawo yokuqala yokuhamba ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokunyuka kwiintaba ezijikelezileyo ngenxa yesikhundla sayo esiphezulu kwi-1,680 yeemitha. I-Lachtal ridge ephambili yindlela ekhululekile onokufikelela ngayo kwisiqingatha seyure kunye neyona ndawo isondeleyo iHoher Zinken (2,222 m) ifikeleleka ngokulula nakubantwana. Ngexesha lasehlotyeni, isitulo esiphambili sikwavulwa ngamanye amaxesha phakathi evekini. Nabani na ohamba ecaleni kwenduli ukuya kwincopho yeSteineck okanye kwincopho ebalaseleyo iGroßhansl (2,315 m), uyakonwabela ukuzulazula kwiintaba ezinengca ezingenazo iindlela njengendawo ethile kwiiCarpathians. Ukunyuka okuhle kwealpine kukunyuka okujikeleze ichibi laseFischsee elibukekayo ukuya kwincopho yeHohenwart (2,363 m). Ukusuka phezulu unokuhla uye kwintlambo kwelinye icala kwaye ujabulele ukuhamba kakuhle kwemini yonke. Kwiintaba ezijikeleze iLachtal kukho izindlu ezininzi zeentaba zemveli apho unokungcamla izinto ezahlukeneyo zaseStyrian.
Ngaphandle kokhenketho lweentaba, ummandla waseMurtal ubonelela ngezinto ezininzi ezinomtsalane kunye neendawo zokuhamba. Ngokuqinisekileyo abantwana baya kuluxabisa utyelelo kwiziko leentambo elimangalisayo kwidolophu eyimbali yaseOberwölz, apho kukho iindlela ezili-10 zobunzima obahlukeneyo, kuquka nezo zoyena mncinane. Ubude obupheleleyo beentsontelo buphantse ukuba yi-3 km kwaye kukho iimpungutye ezininzi eziFlying ezihlekisayo. Ecaleni kweziko leentambo uya kufumana iqula elimnandi lokuqubha langaphandle. Enye indawo enomdla yokuya kuyo yidolophu eyimbali yaseMurau, ukusuka apho oololiwe barhoqo besiya eTamsweg ehlotyeni. Ukongeza, unokutyelela iSchwarzenberg Castle kunye neMurauer Brewery apho. Kwimozulu epholileyo, amachibi ashushu kwi-Aqua Therme Fohnsdorf, iitonela zembali zomgodi wesilivere we-Oberzeiring, imyuziyam yezixhobo zomculo zakudala zeAlpine, okanye iMyuziyam yaseSt Ruprecht Wood ezaliswe lulonwabo yanamhlanje iya kuba yintlupheko emnandi.
Kubakhweli beebhayisikile, zininzi iindlela zokukhwela ibhayisekile ezintle kakhulu kufutshane. Ngokukodwa, sicebisa umkhondo webhayisekile ecaleni koMlambo i-Mur, othe tyaba ubukhulu becala kwaye unokonwabela nabantwana. Ukongeza, uloliwe ubaleka ecaleni kwendlela emxinwa yegeyiji kwintlambo yaseMurtal, ethatha wena kunye neebhayisekile zakho ukubuyisela emotweni. Le ndlela yomjikelo, kubandakanywa icandelo kwintsimi yaseSlovenia naseCroatia, ilinganisa i-457 km kunye nohambo lwebhayisikile lweentsuku ezininzi lunokwenziwa ecaleni kwayo. Enye inketho entwasahlobo nasehlotyeni i-rafting phantsi koMlambo uMur. Kwicandelo lezemidlalo laseTamsweg elinenqanaba le-WW II-III lobunzima uya kukonwabela amanzi asendle enyani, phantsi kwe-Predlitz, uMur ngokuthe ngcembe uyazola kwaye kukho amacandelo amaninzi okuhamba ngesikhephe sokuphumla ehlotyeni kunye nabantwana. Inzuzo kukuba kukho amanzi amaninzi unyaka wonke, kwaye ungasebenzisa umgaqo kaloliwe omxinwa xa ubuyela emva.
Kwi-chalet yethu, unokuboleka imephu yabakhenkethi yale ndawo kwaye ujonge amaphecana asemthethweni kwizinto ezininzi ezikufutshane. Ukuba unqwenela, siya kukuvuyela ukukucebisa ngokwakho ukuba wenze uninzi lokuhlala kwakho kwi-chalet yethu.